ရခိုင်မုန့်တီ | Wutyee Food House
Category: -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ, featured |
khl ka lae ya khine pote tae like tal…kha lote kyi own ma or dar ma ma hote ko bae cook pay like tuu pyan lar yin 😛
ကိုယ်တို့ပြန်လာရင် ငါလုပ်ကျွေးမှာပေါ့.. 🙂
You r so welcome sis
Just suggestion, I am rakhaing . The true monete not add Any ngaphe or Pe kyaw. Just use nannanpin. The boil fish is add the begli ing. Of the Cooking not when it boil. I love your cook book.thanks
ဟုတ်ကဲ့ ခုလို အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။ မခင်က ရခိုင်ဆိုတော့ ပိုသိမှာပေါ့။ ၀တ်ရည်က မုန့်ဟင်းခါးရော၊ ရခိုင်မုန့်တီရော စားရင် ပဲကြော်နဲ့ ငါးဖယ်မပါရင် မစားတတ်လို့ ထည့်ချက်တာပါ။ ဟုတ်၊ တချို့ကလည်း ငါးသားကို သက်သက်ချက်ပြီ ထည့်တယ်။ စာအုပ်လေးလည်း အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် sis ရေ.. 🙂
I am Rakhine. It’s totally different method from sittwe method. In Rakhine Mondee, we never put pae kyaw and nga phae’. For soup, we never put onion and fish meat too. We just boiled soup, galangal (Pa dae gaw)-just pound two or three times, pound garlic(just pound two or three times , black pepper, salt. For fish meat, we have roasted in pan. no oil. fish meat with turmeric powder, salt. after you get roasted fish meat , we put it in when we eat.
How can I uploaded my rakhine mondee pictures?
I really want to make Rakhine mondee and don’t know what kinds of fish should I use? Also do you put any bean powder to make the soup thicken, for example, like mohigna. Can you please help? Your response is greatly appreciated!!!
Begli ing ဆိုတာ ဘာလဲဗျ။ ငါးထဲရော ထည့်တာလား။
Mi Aye Mon says:
Please also try it sis! 🙂
Sorry sis ရေ ငါးရွှေပုံဓာတ်ပုံမရိုက်ထားမိလိုက်ဘူး။ နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်စားရင် ပုံပြန်တင်ပေးပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပါ
what sort of fish is that ? do you know how they call in english ?
ငါးရွှေကို yellow pike-conger လို့ခေါ်ပါတယ်။ ငါးရွှေရှာမရရင် ငါးကြင်း(သို့)ငါးမွှေထိုးငါးနဲ့လည်း အစားထိုးချက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးရွှေရရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့…
ကြက်သားဂေါ်ရဂျီ ချက်နည်းလေး ၀တ်ရည်လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဟုတ် ကြိုးစားတင်ပေးမယ်နော်
It is very simple method. Thank for your kind distribution.
ညီမ facebook မှာ အစ်မရဲ့ ဟင်ချက်နည်းတွေကို ကူးပြီး share လုပ်ထားပါတယ်.အစ်မကို အသိလည်းပေးပြီး ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်
ဟုတ်။ ရှာမရရင်တော့ မထည့်လည်းရပါတယ်.. ပတဲကောပါရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့.. 🙂
ရခိုင်မုန့်တီက ပတည်းကော နဲ့ ငရုပ်ကောင်း မပါရင် ဘာမှအရသာရှိမျာမဟုတ်ဘူးလေ-
Wutyee Food House » သင်္ကြန် မုန့်လုပ်နည်းများ says:
[…] ရခိုင်မုန့်တီ […]
မမ ညီမလေးက လက်ရှိမုံရွာမြို့မှာ ရောက်နေတာဆိုတော့ ပဒဲကောက လွယ်လွယ်နဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ပဒဲကော မပါရင်ရော ရခိုင်မုန့်တီချက်စားလို့ရနိုင်ပါ့မလားရှင့်။
ရခိုင်သုပ်ထဲထည့်စားတဲ့ ငါးပြုတ်ချက်နည်းလေးလဲ အလျဉ်းသင့်သလိုရေးပေးပါဦးနော်။
ဟုတ်။ ပဒဲကောပါရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ မပါလည်း ချက်လို့ရပါတယ်။ ရခိုင်သုပ်ထဲထည့်တဲ့ ငါးပြုတ်က ရခိုင်မုန့်တီချက်တဲ့ ငါးပြုတ်နဲ့ ချက်နည်းတူတူပါပဲ။ တချို့က ငါးကိုပြုတ်ပြီ မုန့်တီအရည်ထဲ မထည့်ချက်ပဲ သက်သက်ထည့်စားတာပါ။ တူတူပါပဲ..
ကြက်သွန်နီထည့်ပြုတ်တာ ရခိုင်စတိုင် အစစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်စတိုင်ဆိုရင် ကြက်သွန်နီ ကိုကြော်ပြီး စားခါနီးမှ အပေါ်ကဖြူးစားတတ်ကြပါတယ်။ (ကြိုက်တတ်ရင်ပေါ့)
ဟုတ်။ ၀တ်ရည်က ရန်ကုန်မှာရောင်းတဲ့ ရခိုင်မုန့်တီစတိုင် ချက်ထားတာပါ
ရခိုင်မုန့်တီမှာပဒဲကောသုံးသလို ရခိုင်ငရုတ်ကောင်းလေးကို ပေါက်ပေါက်လေးဖြစ်အောင်သုံးတာပိုကောင်းပါတယ်
ပြီးတော့ ငါးငံပြာရည်ထက် ရခိုင်မျှင်ငပိလေးသုံး တာအကောင်းဆုံးပါ။ပြီးတော့ကြက်သွန်နီဥတွေ မထည့်ပါဘူး၊ချက်နည်းလေးတင်ပေးတာကျေးဇူးပါ။အကြံပေးတာပါ၊
ဟုတ်ကဲ့ ခုလို အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါ..
Ma Ma Ei says:
ရခိုင်မုန့် တီ က စားချင်စရာပဲ…
Thanks Ma Ma Ei!
အခုလို ရန်ကုန်အလွမ်းပြေ အစားအစာကောင်းကောင်းလေးတွေ ကိုယ်တိုင်ချက်စားလို့ရတဲ့အတွက် မမ၀တ်ရည်ကို ကျးဇူးတင်ပါတယ်။
အစ်မရေ ပတဲကော ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူး။ သမီးက ခုပြည်ပရောက်နေတော့ အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့ ရှာဝယ်ရမှာမို့လို့ပါ။ မုန့်တီ အရမ်းစားချင်လို့ ကိုယ့်ကုိုကိုယ်ချက်စားကြည့်ချင်လို့ပါ အစ်မ။ 🙂 Thank you!
ပတဲကော = Galangal လို့ခေါ်ပါတယ်။ လုပ်စားကြည့်နော် ညီမ..
ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ။ လုပ်စားမယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ် 😀
Ag Ko Htwe says:
Can I know exact measurement of water that we need to add in – ရေ ၁၀ခွက် (Measurement ခွက်)= ml???
ရေ = ၂လီတာပါ 🙂
ရခိုင်မုန့်တီချက်တဲ့အခါမှာ ငပိကို သပ်သပ်ဆူအောင် ကြိုပြီးမှ မုန့်တီဟင်းအိုးထဲကို ထည့်တာ ပိုကောင်းပါတယ်- ဒါမှမဟုတ်ဘူဆိုရင် ငပိနံ့ နံတတ်ပါတယ်။ မျဉ်ငပိ စစ်စစ်ဆိုရင်တော့ ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။
အမှန်က ငရွှေကို အစိမ်းထက် ကင်းထားတဲ့ ငရွှေဆိုရင် ပိုအရသာရှိတယ်- ငရွှေမရရင်- ငရံ့။ ငခု နဲ့လည်းရပါတယ်-
Thanksalot for info! 🙂
ကျေး ဇူး ပဲ အမ
အသေးစိတ်ရေးပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မ၀တ်ရည် ဟင်းတွေ ကို ဖတ် တိုင်းဗိုက်ဆာလွန်းလို့ ပါ။ တခုပြီးတခုကတော့ လုပ်စားဖြစ်တယ် မ၀တ်ရည်
Su Thet says:
ရခိုင်မုန့်တီလေး အမပြောတဲ့အတိုင်းချက်စားတာအရမ်းစားလို့ကောင်းတာပဲ။ တကယ့်ရခိုင်တွေချက်တာဘယ်လိုလည်းတော့မသိပေမဲ့ ရန်ကုန်မှာ ရခိုင်တွေရောင်းတဲ့ မုန့်တီနဲ့တော့အရသာအတူတူပဲ။ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ အိမ်မှာ တပတ်တခါလောက်ကိုချက်စားဖြစ်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့်ပါ sis.. 🙂
Dear Sis Wutyee,
I would like to kindly thanks for your presentation various of recipe. I get alot of knowledge of cooking. I watched on MWD Doc Channel since previous time.
Day Mi Yan says: